DRIVER CHECKER N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
A chọrọ Flash Player si Adobe maka ihe nchọgharị ka ngwa ngwa wee rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Taa, anyị ga-ekwu n'ụzọ zuru ezu banyere ịwụnye mgbakwunye a maka ihe nchọgharị weebụ Yandex Browser.
Tinye Adobe Flash Player na Yandex Nchọgharị
Ejiri ndọtị elebara anya ma nyekwa ya aka na Yandex Browser, n'ihi ya, ọtụtụ ndị ọrụ adịghị enwe nsogbu ọ bụla na ọrụ nke ọdịnaya mepụtara site na iji teknụzụ Flash. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịnwepụ Player Flash. Ị nwere ike ịme ma gbanyụọ ya n'onwe gị dị ka ndị a:
Mwepụta ihe nchọgharị ahụ ma mepee menupụtapụta site na ịpị bọtịnụ ahụ n'ụdị ihe ntụchi atọ. N'ebe a, ị ga-ahọrọ "Ntọala".
Pịgharịa gaa na taabụ ebe ị ga-achọta "Gosi ntọala dị elu" ma pịa bọtịnụ a.
Na ụdị "Ozi Nkeonwe" gaa "Ntọala ọdịnaya".
Nke a bụ ngalaba "Flash". Ị nwere ike idezi ya na mkpa gị - jikwaa nnwale, gbanyụọ ya kpamkpam, ma ọ bụ hazie nkwalite nke ọdịnaya dị mkpa.
Hụkwa: Flash Player na Yandex Nchọgharị: nwee, gbanyụọ ma melite aka
Mmelite Flash Player
A na-emepụta nsụgharị New Player Flash ugbu a, na ịwụnye ha na-atụ aro ya na ohere mbụ kachasị mma. Ma ọ bụghị ya, enwere ike ịnwe nsogbu ụfọdụ na arụ ọrụ nke ngwa. Nkọwa zuru ezu maka imelite ndọtị a na-achọta n'ime ihe anyị dị n'okpuru.
Gụkwuo: Esi melite Adobe Flash Player na Yandex Browser
Nkwado Flash Player
N'ezie, Flash Player ga-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na-enweghị ntọala ndị ọzọ, Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ a chọrọ usoro a iji mee ka iji ihe nchọgharị ahụ dịkwuo mfe. Na nhọrọ nhọrọ, ị ga-achọta ihe ndị na-enye gị ohere ịhazi nkwụsị na nkwalite mmepe na saịtị. Anyị na-akwado ịgbaso njikọ dị n'okpuru iji nweta ntụziaka zuru ezu banyere otu esi edozi Flash Player.
Gụkwuo: Ịtọlite ​​Flash Player maka Yandex Nchọgharị
Idozi nsogbu na ọrụ nke Flash Player na Yandex Browser
Akwụsịghị ọrụ ị na-eji eme ihe nwere ike ime ka onye ọrụ chee na ọ dịghị arụ ọrụ. Otú ọ dị, dịka e kwuru n'elu, ndị Player Yandex nwere Flash Player arụnyere na ndabara. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ọdịda, niile a na-edozi site na ụzọ dị iche iche ọbụlagodi onye ọrụ na-enweghị uche ga-emeso ya, ebe ọ bụ na ha achọghị ihe ọmụma ma ọ bụ nkà ọzọ. Zute ha n'ụzọ zuru ezu na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Ihe ndị mere maka enweghị ike nke Flash Player na Yandex Browser
Anyị na-atụ anya na isiokwu anyị enyerela gị aka ịghọta ihe niile mmasị gbasara Adobe Flash Player na ihe nchọgharị weebụ na Yandex. Ugbu a, nsogbu na nsogbu ọ bụla ekwesịghị iji ya mee ihe.
Hụkwa: Ntak Adobe Flash Player anaghị amalite na akpaghị aka